Imikhosi kunye nemikhosi yoNyaka kaNtshonalanga
Unyaka omtsha waseTshayina ngowona ubalulekileyo kwaye, kwiintsuku eziyi-15, iholide ende kunazo zonke e-China, ekhwela iiveki ezimbini zeveki. Unyaka omtsha waseTshayina uqala ngosuku lokuqala lwekhalenda yenyanga, ngoko kuthiwa ngu-Unun Year New, kwaye uthathwa njengesiqalo sentwasahlobo, ngoko kuthiwa yiSpring Festival. Iholide izaliswe nemisebenzi emininzi kunye nabasemagqatshini abahlala ixesha elide kunokwenzeka ukuba bathathe iNyaka entsha.
O kunqula u-Ancestors
Ukuqala ngemini, okhokho banqulwa kwaye banikwe iminikelo yeentsikelelo kunye nokukhuselwa kunyaka owedlule. Izipho ziquka iziqhamo, izithelo ezomileyo, kunye namanqwanqwane aphucukileyo. Ethempelini, iintsapho ziya kutshisa iintonga zesiqhumiso kunye neengxowa zemali zamaphepha.
Ukutya isidlo seNtsapho enkulu
Enye yezinto ezibalaseleyo zonyaka weNtshonalanga kukutya. Ngomhla woNyaka omtsha waseTshayina , umthendeleko omkhulu uhanjiswa. Ukususela ngoNyaka Omtsha weTshayina yiholide yesizwe e-China, eHong Kong, eMacau naseTaiwan, phantse wonke umntu abuyele ekhaya ngomnyaka omtsha waseTshayina. Kwezinye iintsapho, yithuba elilodwa kuphela ngonyaka ukuba yonke intsapho iya kuba kunye. Kwezinye iimeko, akusiyo onke amalungu entsapho abuyele ukuze indawo yokubeka ibeke imbeko.
Into edlayo nganye inomfanekiso okhethekileyo. Umthendeleko womnyaka omtsha waseTshayina uquka:
= ubutyebi ngenxa yezinto ezinjengesiliva kunye negolide zekare.
Intlanzi = intsalela kuba 鱼 ( yú , intlanzi) izandi ngathi 餘 ( yú , surplus). Ukushiya intlanzi encinane kwintlanzi yinto yesiko njengoko ibonisa ukuba kuya kuba nokwaneleyo kwintsapho kulonyaka ozayo. Intsapho ilumkele ukuba ingaphuli amathambo entlanzi njengoko oku kungenisa inhlanhla.
Utywala obukhulu = ixesha elide kuba 酒 ( jiǔ , utywala) izandi ngathi 久 ( jiǔ , longevity).
Ukugubungela ama-Dumplings kwaye ubukele u-Countdown of Eve omtsha kwi-TV
Kwilizwe laseKinayi, phantse zonke iintsapho zihlala etafileni isidlo kunye nokugubungela iindwangu ngelixa zibukele iGala leMinyaka elitsha le-CCTV (春节 联欢晚会), iintlobo ezihlukeneyo zoNyaka omtsha zokubala zibonisa kwi-CCTV.
Ukususela kumdala kunokuba ilungu lentsapho elincinane kunazo zonke, umntu ngamnye uthatha inxaxheba.
Amadaka aneentlobo ezahlukeneyo zokuzaliswa, kuquka inyama, intlanzi kunye nemifuno, zihlanganiswe ngesimo segolide zesiTshayina zesiliva negolide, ezifanekisela ubutyebi. Imali yegolide ihlanganiswe ngaphakathi kwelahla enye. Efana neKardi Gras ikhekhe apho umntwana weplastiki efihliweyo kwisiqheba esisodwa, umntu ofumana ukulahla kunye nengqekembe yengaphakathi kuthiwa unenhlanhla yonyaka ozayo. Iidumbu zidla ngokutya phakathi kobusuku kunye neeholide ezimbini zeveki.
Dlala i Mahjong
I-Mahjong (麻將, má jiàng ) ngumdlalo osheshayo, umdlalo omine odlalwa kuwo wonke unyaka kodwa ngokukodwa ngexesha loNyaka omtsha waseTshayina. Funda konke malunga nokudlala i-mahjong .
Qalisa imiSebenzi yoMlilo
Imisitho yomlilo yazo zonke iimo kunye nobukhulu buqaliswe phakathi kobusuku noNyaka woNyaka omtsha. Amaplanga aphethe iphepha elibomvu yizona zizithandwa kakhulu. Isithethe somlilo saqala ngembali kaNian , i-monster eyingozi eyayinoyika umbala obomvu nomsindo omkhulu. Kukholelwa ukuba izixhobo zomlilo ezivakalayo zatshitshisa i-monster. Ngoku, kukholwa ukuba izixhobo zomlilo kunye nengxolo zikhona, inenhlanhla iya kuba ngowokuNyaka omtsha.
I-Boxer Rebellion ye-China kwiifoto
Indlela yokulinganisela ukulingana kwemichiza
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiyunivesithi zikawonkewonke